TOOSHKA PTIMES:Khilaafka ka dhex aloosan Gaas & Camay dibu dhac maku keeni karaa doorashada Puntland? – Puntlandtimes
TOOSHKA PTIMES:Khilaafka ka dhex aloosan Gaas & Camay dibu dhac maku keeni karaa doorashada Puntland?
December 4, 2018 Puntland PL
GAROWE(P-TIMES)- Inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay soo jiitamayeen khilaafka iyo xugufta siyaasadeed ee ka dhex aloosan madaxweynaha Puntland Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland Eng. C/xakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camay hadana xaalku waxa uu cirka isku sii shareeray mar kale, kadib markii maalintii shalay ahayd uu madaxweyne ku xigeenka Puntland Eng. C/xakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camay uu isna dhankiisa soo magacaabay gudida xalinta khilaafaadka iyo kala saarista xubnaha Baarlamaanka Puntland ee sanadka 2019 oo uu markii hore magacaabay madaxweyne Gaas.
Arintani oo jaah wareer siyaasadeed abuurtay ayaa waxaa si weyn u hadal haya qaybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiinta oo aragtiyo kala duwan ka muujiyey arinkani.
Eng. Camay ayaa u cuskaday magacaabista xubnihii uu shalay ku dhawaaqay la tashiyo uu la sameeyey musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Puntland, waxaana uu daaha ka qaaday in xugufta u dhaxaysa labada masuul ee Camay iyo Gaas ay gaadhay meeshii ugu saraysay, taas oo muujinaysa in khilaafka u dhaxeeya labadooda uu haatan sababi karo dibu dhac ku timaada doorashada madaxtinimada Puntland.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Eng. C/xakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camay oo ah hogaanka labaad ee Puntland ayaa lagu tiriyaa amaba lagu eedeeyaa dadka sida dhow u taageersan dowladda madaxweyne Farmaajo, waxaana siyaasiyiinta mucaaradka ah ay xiligani dan u arkeen in uu qayb ka ahaado qorshayaashooda siyaasadeed.
Madaxweyne Gaas oo isna aanan wax xidhiidh ah la lahayn dowladda federaalka Soomaaliya ayaa u arkaya Mr. Camay shakhsi u fududayn kara qorshe kasta oo ay dowladdu ka leedahay Puntland, waxaana uu marar kala duwan kasoo hor jeestay go’aamo kasoo baxay shirar ay qabsadeen gollaha dowladd goboleedyadu oo uu mar gudoomiye kasoo noqday madaxweyne Gaas.
Marka laga yimaado xiisada labada hogaamiye ayaa hadana waxaan meesha ka maqnayn qorshe dowladda federaalka Soomaaliya ay ku doonayso in ay ku hanato dowladd goboleedyada, kaas oo intiisa badan ku qotoma in hogaamiyaal cusub oo la jaanqaada Farmaajo iyo Khayre ay ka yimaadaan shanta dowladd goboleed ee haatan ka jira gudaha dalka.
Arintani ayaa loo sababaynayaa in ay ka dambaysay in xilka uu iska casilo madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan isla markaasna ay sababi karaan qorshayaasha u dagsan Farmaajo iyo Khayre in ay daaqada ka saaraan saddexda madaxweyne ee haatan ku hadhay furimaha dagaalka siyaasadeed ee madaxda dowladd goboleedyadu ay kula jiraan dowladda federaalka Soomaaliya.
Marka laga eego dhinacyo badan iyo baahiyaha haatan ka taagan dalka waa mid awoodiisa ay ku loolamayaan madaxda dowladd goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka, mana jiro nidaamo iyo xeerar kala xadayn kara labada dhinac.
Maxaa kamid ah arimaha dibu dhaca ku keeni kara doorashada Puntland?
Siyaasada iyo khilaafka labada bog ka raran ee Puntland ay haatan ka taagan ayaa siyaasiyiinta iyo dadka indha indheeya siyaasada Puntland waxa ay ku sheegeen in arintani ay sababi karto muddo kordhin iyo dibu dhac ku timaada doorashada madaxtinimada Puntland marka laga eego qodobadan:-
1- Dhamaystirida xildhibaanada Baarlamaanka Puntland oo tira ahaan dhan 66 xildhibaan, kuwaas oo aanan weli lasoo dhamaystirin.
2- In la isku waafaqo gudida khilaafka oo haatan muran ka taagan yahay oo madaxweyne Gaas iyo Camayba dhinaciisa u magacaabay gudida kale.
3- Shakhsiyaad ka tirsan xukuumadda Gaas oo kasoo dhex muuqday gudida xalinta khilaafaadka, waxaana taasi ay sababi kartaa khilaaf hor leh, kala qaybsanaan iyo musharaxiintu aysan kalsooni buuxda siinin xubnahaasi.
4- Madaxweyne Gaas oo aysan weli cadeyn mowqifkiisa Puntland iyo hogaanka 2019 oo uu mar kale ku haminayo balse qorshe kasta la damacsan kusii nagaashaha Puntland.
5- Musharaxiinta oo kala qaybsan iyo shakhsiyaad dano gaar ah leh oo kasoo dhex muuqday.
6- Dowladda federaalka Soomaaliya oo fara gelin xoogan ku haysa doorashooyinka dowladda goboleedyada.
7- Xildhibaanada Beesha Dhulbahante oo aanan weli la isku af garan soo dhamaystirkooda iyo Isimadda Beesha Dhulbahante oo kalsoonidii kala noqday xukuumadda Gaas.
8- Mooral xumo shacabka kasoo wajahday xoreyntii gobolka Sool oo gaabis ay galisay xukuumadda Gaas.
Lasoco qaybaha kale ee warbixinaha taxanaha ah ee TOOSHKA PTIMES
FIIRO GAAR AH: Halkan hoose riix oo ka akhriso magacyada gudiyadii uu Camay iyo Gaas mid walbaaba gooni u magacaabay.
DEG DEG: Madaxweynaha Puntland oo magacaabay Guddiga Ansixinta Xildhibaanada cusub.
DEG DEG-Camey oo Magacaabay Gudiga Ansixinta Barlamaanka Kana Horyimid Madaxweyne Gaas.